Haintany any atsimo : mivaivay ny tsy fanjarian-tsakafo
Par Taratra sur 02/02/2016 Divers, NS Malagasy
Iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo ny mponina ao amin’ny faritra Androy vokatry ny haintany any an-toerana. Maina ny tany, tsy misy ny rano hanondrahana ny fambolena maty avokoa ny biby fiompy ary tsy misy ny vokatra andrandraina. Noana sy mangetaheta araka izany ny mponina. Efa nisy mihitsy ny mamoy ny ainy tao amin’ny faritra Anosy, distrikan’Amboasary Atsimo […]
Dingadingana any Sainte Marie : nailikilika ny Malagasy
Par Taratra sur 02/02/2016 Economie, NS Malagasy
Nilaza ireo Malagasy miisa 20, mivelona amin’ny fitrandrahana dingadingana (cocombre de mer) any amin’ny Nosy Sainte-Marie fa « tsy ara-dalàna ny fandroahana anay. Manana fahazoan-dalana avy amin’ny minisiteran’ny Jono sy ny harena an-dranomasina avokoa izahay, azo ampiasaina manerana an’i Madagasikara». Navoitran’izy ireo koa fa nampivorian’ny ben’ny Tanànan’i Sainte Marie ireo mpanjono sy mpitrandraka ireo ary nangatahany […]
Croix rouge malagasy : ampianarina ho vanona ny tanora
Nahazo birao iasany ny sampana Croix rouge malagasy ao amin’ny distrikan’i Manjakandriana. Ao amin’ny kaominina Nandihizana ny birao satria natolotry ny kaominina ny trano ampiasain’ny fikambanana ao an-toerana. Anisan’ny andraikitra lehibe sahanin’ny mpilatsaka an-tsitrapo ny fanofanana ny tanora mba ho vanona. Tsapa fa betska ny ankizivavy mbola mianatra amin’ny ambaratonga faharoa mitondra vohoka sahady. « Efatra […]
Par Taratra sur 02/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Mandeha ny fanentsemana ireo lavadavaka amin’ny lalam-pirenena fahafito (RN 7). Tanjon’ny minisiteran’ny Asa vaventy ny hampizotra ara-dalàna ity lalana ity, mampitohy an’Antananarivo-Toliara. Nomarihin’ny minisitra Ratsiraka Roland koa fa ela loatra sy maro ny dingana arahina amin’ny fivoahan’ny famatsiam-bola vahiny amin’ny fanamboaran-dalana. Mandalo ao Toamasina ny sambo mpiandry morontsiraka indianina, Samarth. Miantsona any izy ny 1-4 […]
Miparitaka manerana an’i Madagasikara ny fikambanana tsy miankina ONG Graine de vie. Mampiavaka ihany koa ny fanomezana maimaimpoana ny zanakazo vokariny ho an’ny rehetra. Famerenana an’i Madagasikara ho tontolo maitso! Io ny tanjon’ny fikambanana ONG Graine de vie, manana sampana eto Madagasikara. Fito taona tonga eto amintsika ity fikambanana iraisam-pirenena ity, nanomboka tany amin’ny faritra […]
Fepetra sy singa jeren’ny vondrona iraisam-pirenena ny fisian’ny fanjakana tan-dalàna na tsia ao amin’ny firenena iray. Sarotra ny inoana ny fisian’io eto Madagasikara, raha ny tranga sy ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Hanamarinana izany, vao tsy ela (notaterina teto ny asabotsy 30 janoary teo) ny didim-pitsarana tsy mazava, nahafahan’ilay ramatoa iray, efa nanaiky ny fandroahana […]
BFV-SG : nankasitrahana ny mpiasa 65
Natao teny Andoharanofotsy, ny 30 janoary teo ny fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao, ao amin’ny banky BFV-SG. Notanterahina tamin’io fotoana io koa, ny fanomezana mari-boninahitra ny mpiasa mendrika. Nahatratra 65 izy ireo, ka nahazo Officier de l’ordre national ny 11 ; Chevalier de l’ordre national 19 ; Officier de l’ordre de mérite 6 ; chevalier de l’ordre du […]
Raha ny antontanisa farany (2013) navoakan’ny Instat, 400.000, 500.000 isan-taona ny tanora nahavita fianarana tonga eo amin’ny tsenan’ny asa. Betsaka ny vehivavy noho ny lehilahy. Mitombo tsy tapaka ny isan’ireo tsy anasa ireo ary vao mainka mihasarotra hatrany ny hahita asa. Tanora avokoa ny 70 % amin’ireo tsy mahita asa eto amintsika. Efatra tapitrisa eo […]
Nihaona tamin’ny lehiben’ny faritra Boeny, Saïd Ahamad Jaffar, tao Mahajanga, ny governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara, Rasolofondraibe Alain Hérvé, ny 28 janoary teo. Nampahafantarin’ny governora tamin’izany fa mihena hatrany ny vola miasa eo anivon’ny Banky Foibe. “Ny antony, hoy izy, tsy misy firy ny famoronana harena ka mitovy, manaraka izay, ihany koa ny vokatra aondrana any […]
Mivarahontsana ny any Nizeria ankehitriny noho ny fitotongan’ny vidin-tsolika. I Nizeria izay mpamokatra solika voalohany aty Afrika. Mihalafo ny rehetra : hofan-trano, sakafo … niakatra avokoa afa-tsy ny karama ! Betsaka ny mpiasa manao fitokonana noho izay fisondrotan’ny vidim-piainana izay, saingy tsy mampiova zavatra. Mbola ho mafimafy kokoa ny ho avy, araka ny vaovao avoakan’ny […]
Nanao fivoriana, ny 29 janoary teo, ny tompon’andraiki-panjakana samihafa, ao amin’ny faritra Boeny ho fanatsarana ny fomba fiasa ao anatin’ny làlam-pihariana omby. Nambara tamin’izany fa tokony hihena hatrany amin’ny 80% ny halatr’omby hatramin’ny volana marsa raha toa ka arahina an-tsakany sy an-davany ny toro-marika rehetra avy ao amin’ity fihaonana ity. Teo no nanentanan’ny lehiben’ny faritra […]
Radanoara Julien : « Handalo kihon-dalana isika »
Par Taratra sur 02/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
tokony hohararaotina. « Handalo kihon-dalana sy fanapahan-kevitra lehibe eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena isika amin’izao handraisana ny fihaonana an-tampony indroa miantoana : Comesa hatao ny oktobra sy ny Frankofonia (OIF) hatao ny volana novambra ho avy izao », hoy ny mpandinika ny fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien, omaly tamin’ny resaka nifanaovana taminy. Nanteriny fa fotoana koa io hanaovan’ny fianakaviambe […]
An-kitsim-po : nametraka hafatra i Ban Ki-moon
Atahorana hamely mafy firenena maro aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika ny mosary vokatry ny toetr’andro “El Nino”. Anisan’ireo firenena ireo i Madagasikara, araka ny tatitra navoaka nandritra ny fivorian’ny Vondrona afrikanina natao tany Addis-Abeba, Etiopia, ny herinandro lasa teo. Nanao antso avo amina firenena maro ny Sekretera jeneralin’ny Firenena mikambana, Ban Ki-moon, hitondra fanampiana ho […]
Praiminisitra Ravelonarivo : « Milamina ary tsy manana olana amin’ny filoha aho »
« Milamina tanteraka ny fifandraisanay sy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Tsaho ny filazana fa tsy mifankahazo izany izahay. Tsy mitombina izany », hoy ny Praiminisitra Ravelonarivo Jean, omaly teny Mahazoarivo. Nambarany fa mitohy hatrany ny asa ka anisan’izany ny fidirana amin’ny 100 andro fahatelo. « Miandry ny fankatoavana azy sisa ny Rindra safatsiroa ho an’ny sehatry ny filaminana sy […]
Loholoan Lilyson : « Efa maro ireo niala amin’ny filoham-pirenena… »
Tsy nitsitsy fitenenana. « Niala amin’ny filoha Rajaonarimampianina, notohanan’ny filoha Rajoelina ny vahoaka. Anisan’ny antony mahatonga izao zava-drehetra tsy mandeha amin’ny laoniny izao izany », hoy ny Kly Lilyson René sady loholona, omaly teny an-tranony. Ankoatra izany, nambarany fa efa naka fotoana, amin’ny tsy maha miaramila azy ny tenany amin’izao nirotsahany ho loholona sy nahavoafidy azy izao. « Efa […]
Nitondra fanazavana, momba ny hananganana ilay fitsarana manokana hisahana ny ”Raharaha andramena sy voamboana”, ny mpahay lalàna, Rakotomanana Honoré. “Raha any Antsiranana, Antalaha, Taolagnaro, ohatra, no tena mpanondrana andramena be dia be, eto Antananarivo ihany no hitsarana azy”, hoy ny ny mpahay lalàna, ny Pr Rakotomanana Honoré, teny Anosy, omaly, momba ny fananganana ny […]
Namoaka tolotr’asa hisahana andraikitra eo anivon’ny sampandraharaha sy tale maromaro ny eo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni). Tafiditra amin’ny fampidirana mpiasa vaovao eo anivon’ity rafitra iray misahana sy mikarakara ny fifidianana ity izany. Feno 41 taona amin’ny 5 febroary izao ny nanoloran’ny Jly Ramanantsoa Gabriel ny fahefana feno ho an’ny Kly Ratsimandrava, […]
Tanambe Amparafaravola : dahalo fito maty voatifitry ny zandary
Par Taratra sur 02/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Dahalo raindahiny miisa fito indray maty voatifitry ny zandary nandritra ny fifampitifirana tao Tanambe Amparafaravola, ny faran’ny volana janoary lasa teo. Basy mahery vaika Mas 36 iray sy basy vita gasy ary bala no tratra tany amin’izy ireo… Mirongatra ny halatra any amin’ny distrikan’Amparafaravola tao anatin’ny roa volana (desambra 2015 sy janoary 2016). Vokatr’izany, […]
Ambatomirahavavy : tratra ireo mpamatsy sy mpivarotra rongony
Saron’ny zandary avy ao amin’ny tobim-paritry ny zandarimaria Ambatomirahavavy, ny alarobia 27 janoary 2015 lasa teo ireo mpamatsy sy mpivarotra rongony amin’iny faritra iny. Araka ny fanazavan’ny lietnà Talatamalalavonjiniaina Jean Baptiste, lefitry ny kaomandin’ny kaompania zandarimaria ao Arivonimamo, nandritra ny fisafoana nataon’izy ireo no nahatrarana jiolahy iray mpangalatra akoho tao amin’ny orinasa iray eny an-toerana. […]
Ambalavao : polisy efa-dahy voalaza fa nitaky vola tamin’olona
Polisin’ny Fip efa-dahy miasa any Ambalavao no anaovan’ny zandary famotorana mikasika ny fanerena olona handoha vola. Olona roa hafa voalaza fa nakan’ireo polisy ireo vola kosa no anaovana famotorana noho ny resaka halatra taolam-paty. Araka ny vaovao azo avy amin’ny zandary, ny 26 janoary lasa teo, nisy roa lahy avy any Fianarantsoa tonga tany Andonaka, […]
Ambatondrazaka : ravan’ny zandary ny tambajotran-jiolahy
Ravan’ny zandarimaria ao amin’ny borigadin’i Didy Ambatondrazaka, ny 27 janoary 2016 lasa teo ny tambajotran-jiolahy, mpampihorohoro ny vahoaka ao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Didy. Voalaza fa mpamaky trano sy mpanao fanafihana mitam-piadiana ao Antsevabe sy Ambohimanga ao Ambatondrazaka ry zalahy ireto. Maro ireo olona efa nitondra faisana tamin’ireto jiolahy ireto ka nangataka ny hanaovana fitsaram-bahoaka izy […]
Voatendry ireo 21 : mety ho Rakotomanana Honoré no filohan’ny Antenimierandoholona
Teraka ihany Ambatobevohoka ? Nambaran’ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, omaly alina tamin’ny alalan’ny haino amanjerim-panjakana (RNM/TVM), ny lisitr’ireo loholona 21 notendren’ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Anisan’ny misongadina amin’ireo anarana 21 ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) teo aloha, Rakotomanana Honoré. Tombanana fa mety izy no ho filohan’ny Antenimierandoholona ary azon’ny filoha Rajaonarimampianina antoka fa afaka […]
Teo imason’ny ny minisitra sy ny ambasadaoro : nifanjevo indray ny « gros bras » sy ny mpiasan’ny kaominina
Par Taratra sur 02/02/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Tsy mbola nahitam-bahaolana. Raikitra indray ny fifanjevoana teo amin’ny mpiasan’ny kaominina, mitokona, sy ny « gros bras », manohana ny ben’ny Tanànan’i Toamasina, omaly. Niseho izany tamin’ny fandalovan’ny vahiny tany an-toerana. Nanomboka tamin’ny 10 ora maraina ary naharitra ora iray teo ny fifandonan’ny mpiasan’ny kaominina sy ny « gros bras » teo amin’ny lapan’ny Tanànan’i Toamasina, omaly. Nitazam-potsiny ny […]
Par Taratra sur 02/02/2016 Edito Les Nouvelles, NS Français
Mandat. Il est des prises de position qui, en fonction de la personnalité ou de l’organisation qui parle, font tout de suite l’unanimité. D’autres cependant, selon les étiquettes affichées à travers les médias ou par des observateurs se disant « experts », divisent. Le président tchadien Idriss Déby Itno se trouve dans cette posture aujourd’hui. Ce dernier […]
« Précédent 1 … 1 462 1 463 1 464 1 465 1 466 … 1 492 Suivant »